Maqaallo | Hassan Mudane
KU BARASHADA CILMIGA AFKA HOOYO
December 25, 2019 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Waxbarashadu waa aqoon iyo waayo’aragnimo la uruuriyey. Aqoontuna wax kale ma aha oo aan ka ahayn la socodka iyo dib-u-aragga jiraalada uunka nool iyo kuwa aan noolayn, qaababka kaladduwan ee maaterka nool iyo midka aan noolayn. Waxbarashadu waa ogaanshaha sida runta ah ee ay wax u jiraan, haddii ay tahay bulsho, dabeecad, maamul, dhaqan, iyo […]
Baaris Akademiyeedka Cilmiga Bulshada: Casharkii 13aad
April 9, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Wareysiga Madaxda Casharkii laba iyo tobanaad waxa aynu ku soo baranay aaladda wareysiga. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa sida uu cilmibaaruhu u wareysan karo dadka madaxda ama siyaasiyiinta rugcaddaayaasha ah (political elites). In cilmibaaruhu wareysto xubno ka mid ah xisbiyo ama siyaasiyiin waa hawl inta badani ay u gooni tahay baarista siyaasadda (political research). […]
ISDABOOLKA DHACDOOYINKA: Sidee dhacdo cusub u dabooli kartaa dhacdo taagan?
April 4, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· 1 Comment
Wixii ka dambeeyey dhacdadii ‘Gu’gii Carabta’ (Arab Spring) dunida waxaa ku dulwareegtay dhacdooyin la siyaasadeeyey, intooda badan loo adeegsaday ujeeddooyin maanduub (Manipulation). Haddii aynu dib u eegno jiritaanka dhacdooyinka dunida, laba meel ayaa ilo u ah: Midda koowaad, dhacdooyin dabiici ah oo laga soo xukumay samada. Tan labaad, dhacdooyin aan dabiici ahayn, taas oo […]
SOMALIA’S NEW SCAPEGOAT
March 20, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Ethiopia was widely seen as Somalia’s scapegoat for a long time, and now even the United Arab Emirates appears to join the club. The last two weeks were full of confusion for Somalia. It resulted after the tripartite agreement signed between UAE’s DP World, Ethiopia, and Somaliland without consulting with the Somali Government of Somalia […]
March 17, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Habka Tirada Casharkii sagaalaad waxa aynu ku soo baranay labada hab cimibaarineed, kuwaas oo loogu adeegsi badan yahay, marka la joogo cilmibaarista. Casharkan waxa aynu si gaar ahaaneed ugu falanqayn doonaa hab baarineedka ku jaan go’an tirada ama nambarka (Quantitative Method). Habkan waxa uu diiradda saarayaa cabbiridda iyo xisaabinta xogta uruursan, taas oo uruurinteedu loo […]
Habka Cimibaarista Casharkii siddeedaad waxa aynu ku soo baranay taariikhda fekerka cilmibaarista, iyada oo kooban. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa habka cilmibaarista gaar ahaan labada hab, ee loogu isticmaalka badan yahay marka ay timaaddo baaris akademiyeedka cilmiga bulshada iyo sayniska. Labadaas hab baarineed waxay kala yihiin: Habka Tirada (Quantitative methodology) iyo Habka Tayada (Qualitative […]